Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Cuntada Weel | Warshadda Quudinta Shiinaha ee Bow Bowl
Dhalo Cabitaan Ey la qaadan karo ah
Muuqaalka weelkan birta ah ee birta ah ee birta ah ee birta ah waa mid la saari karo, bakteeriyada birta birta ah ee u adkeysata saldhigyada caagga ah ee waara.
Weelka eyga ee birta ah ee birta ah ee aan lahayn ahaanta leh sidoo kale waxaa ku jira saldhig caag ah oo sagaaro leh oo laga saari karo si looga caawiyo hubinta aamusnaan, cunnooyin lacag la'aan ah.
Weelka Labaad ee ahama ee birta ah ee biraha ah waxaa lagu dhaqi karaa makiinada weelka dhaqda, kaliya ka saar salka caagga.
Ku habboon cuntada iyo biyaha labadaba.
Dhalo biyo eey dillaaci kara
Dhalo biyo ee Ey oo isku duuban waa ku fiican tahay socodka iyo socodka eeygaaga ama bisadaada. Dhaladaan biyaha ah oo leh muuqaal mood, saxan balaaran ayaa xayawaankaaga si fudud ugu cabi kara biyaha.
Dhalo biyo ee Ela oo isku duuban ayaa laga sameeyaa ABS, oo aamin ah oo waara, kala furfurista iyo nadiifinta fudud. Waxay ku haysaa caafimaadka iyo firfircoonida xayawaankaaga rabaayadda ah.
Kaliya maahan eeyaha, laakiin sidoo kale xayawaannada yaryar sida bisadaha iyo bakaylaha.
Masaasadda Eyga Collapsible Dog waxaa loogu talagalay inay ku hayso 450 ML oo biyo ah xayawaankaaga ka dib markaad biyaha ku dhex tuujiso weelka, aad ayey ugu habboon tahay in la isticmaalo.
Birta Ey ahama
Maaddada baaquliga eyga birta ah waa miridh diida, waxay bixisaa beddel caafimaad leh oo caag ah, ma laha ur.
Weelka eyga ee birta ah ee birta ah wuxuu leeyahay saldhig caag ah. Waxay ka ilaalisaa sagxadaha waxayna ka ilaalisaa fijaannada inay sibxadaan inta xayawaankaagu wax cunayo.
Bakeerigan eyda ah ee birta ah ayaa leh 3 cabir, oo ku habboon eeyaha, bisadaha, iyo xayawaannada kale.Waxay ku habboon tahay kibble qalalan, cunto qoyan, dawayn, ama biyo.
Bowl ahama birta birta ah ee birta ah
Cunno Ey Fududeyn iyo Bowl biyo
Cunnadan eey iyo weel biyo ah oo leh naqshad isku-dhafan oo si fudud u fidi kara una laalaabi kuwaas oo ku fiican safarka, socodka, kaamaynta.
Cunnida eyda burburi karta iyo baaquli biyoodka waa fijaano safarka xayawaanka ah, waa miisaan fudud oo fudud in lagu qaado suunka koritaanka. Marka waxaa lagu dhejin karaa suunka loop, boorsada, xadhig, ama meelo kale.
Cunnada eeyga iyo weelka biyaha ayaa noqon kara kuwo isku burburin kara cabirro kala duwan, sidaa darteed waxay ku habboon tahay dhammaan eeyaha yar yar ilaa kuwa dhexdhexaadka ah, bisadaha, iyo xayawaanada kale inay keydsadaan biyaha iyo cuntada markay banaanka u baxayaan.